Home News Barlamaanka Puntland oo go’aamiyay waqitiga doorashada Madaxweynaha dhacayso
Balaamaanka Puntland ayaa shalay oo bisha Ogosto ahayd 14keedii go’aamiyay in doorshada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka dhici doonto Bisha Janaayo 8deeda ee sanadka 2019. Halka doorshada Gdoomiyaha Baarlamaanka la qaban doono bisha Diseenbar 30 keeda ee sanadkan.
Go’aankaan ayaa ka hor imaanayo rabitaanka Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas oo doonayay in doorashada dib loo dhigo. Waxaa sidoo kale muuqanaysa in doorashada Madaxweynaha Puntland noqon doonto mid qabiil lagu soo doorto oo ayan noqon doonin mid xisbiyo ku tartamaan.
Previous articleRW Kheyre iyo Guddoomiyaha Baarlabaanka Maxamed Mursal oo isku qilaafay ka qeyb galkii casha sharafta loo sameeyay Wasiirka Arrimaha Dibadda Eriteriya (Sababta)
Next articleDowlada Eritereeya oo ku gacan seertay codsigii MW Farmaajo, Maxaa is badalay?
War Deg Deg ah:-Askari Lagu Dilay isgooyska Bakaaraha